Madasha Xisbiyada Siyaasadda iyo Xisbiga Wadajir oo si isku-mid ah usoo dhoweeyay shirka Dhuusamareeb – Kalfadhi
Madasha Xisbiyada Siyaasadda iyo Xisbiga Wadajir ayaa si isku-mid ah usoo dhoweeyay natiijadii ka soo baxday shirkii Dhuusamareen uga socday 11-13 Julay, dowlad-gobolleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xisbiga Wadajir ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, ayaa sheegay in natiijada kasoo baxday shirka ay xoojineyso mowqifkii ay horay xukuumadda iyo Xisbiyada Siyaasadda u qaateen, kaas oo ahaa in dalka ay ka dhacdo Doorasho aan xiligeeda kaddib dhicin.
Dhinaca kale Madasha ayaa soo dhoweyday gogosha loo fidiyay madaxda dowladda, waxaana ay ku baaqday in Uurada Bulshada, Xisbiyada iyo daneeyayaasha siyaasadda laga qeyb-gelliyo gogosha la dhigay.
Madasha ayaa sidoo kale caddeysay in xiligan loo baahanyahay wada-tashi ku aaday halka loo jiheysanayo.
Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa shalay si diiran u soo dhoweeyay shirkii wada-tashiga maamul-gobolleedyada iyo war-murtiyeedkii ka soo baxay.
Go’aannadii kasoo baxay shirka ayuu sheegay in uu u arko kuwo guul hordhac u ah heshiis wada-jir ah oo ay gaaraan dowladda federaalka iyo maamul-gobolleedyada, dalkan u horseedi kara nabad, deganaansho iyo horumar.